Mba mahatsapa alahelo sy manenina amin’ny ratsy nataony tamin’ny olon-tiany ve ny lehilahy ?
Olombelona toy ny rehetra ihany ny lehilahy ary manenina sy malahelo tokoa izy, fa ny fomba fanehoany izany fotsiny no tsy mitovy amin’ny fomba fanehoan’ny vehivavy ny alahelony.
Mety mody miseho ho mafy be izy, tsy hita soritra ety ivelany amin’ny ranomaso ny alahelony sy ny fanenenanany, satria te hiseho ho olon’ny saina, araka ny takian’ny fiarahamonina aminy. Mety misy ihany koa anefa ny lehilahy mitomany, rehefa mifona amin’ny hadisoana vitany. Fa ao koa ireo matin-kambo ka tsy te hiseho ho diso mihitsy, nefa any anatiny any, fantany ihany ny ratsy nataony. Tsy azo lavina koa anefa, fa misy ireo miziriziry amin’ny heviny, ka tsy hanaiky mihitsy hoe : nanao hadisoana, ka tsy hanenina amin’izany mihitsy.
Amam-bolana izaho sy ny olon-tiako no niaraka dia milaza ny hanambady ahy izy. Ny olako dia ahitako olana foana io lehilahy miaraka amiko io, nefa milaza ho tia ahy. Any anefa misy lehilahy tiako sady tia ahy koa. Mba toroy hevitra aho.
Tena tia anao ny olona miaraka aminao matoa izy sahy milaza aminao fa hiroso amin’ny dingana ambonimbony kokoa eo amin’ny fifankatiavanareo. Ianao nefa misalasala satria misy olon-kafa tia anao sy lasa tianao , ka manjary lasa toa ahitanao hadisoana foana ilay olona miaraka aminao hatramin’izay. Tokony haka fotoana ianao handinihana izay tena tianao sy andrian’ny fonao, satria izay hahasambatra anao no tanjona. Raha toa ilay niaraka taminao taty aoriana no tianao kokoa, tsy ahitanao hadisoana sy mampihiratra ny fiainanao, dia tokony hisaraka amin’ilay olona miaraka aminao amin’izao fotoana ianao. Fantaro mihitsy izay heverinao fa hahasambatra anao, afaka miara-manatratra aminao ny tanjom-piainanao, fa aza entin’ny fo fotsiny.
Telo taona nivadiana izaho sy ny vadiko ary manan-janaka iray. Tamin’ny telo volana lasa izay dia tratrako nampirafy ahy izy. Rehefa noteneniko izy dia nahorony ny entany ary lasa nipetraka tany amin’ilay vehivavy izy. Herinandro lasa anefa izay, nifona tamiko izy ary nilaza fa ratsy toetra be ilay vehivavy, ka te hiverina amiko izy. Tokony ekeko ve ny fifonany ?
Efa nahatsapa io vadinao io fa nisy ny hadisoana nataony tamin’ny fampirafesany anao, matoa izy nifona. Tsapany ihany koa fa tsy misy tia azy mihoatra anao ary manahy izy sao tsy hahita toa anao intsony. Na dia misy aza izany fifonany izany dia ilaina ihany ny mifampiresaka tsara ny amin’ny zava-niseho sy ny antony nahatonga azy hanao io fihetsika io. Tokony hazava tsara hoe : avy aiza ny olana ary tokony hisy vahaolana ihany koa manaraka izany, mba tsy hiverenan’ilay tranga intsony. Atao ho anatra avokoa ny zavatra rehetra ary ataovy mazava aminy fa tsy tantinao ny nataony ary tsy hanaiky intsony ianao raha mbola miverina ny toy izany.